SAMSUNG ဖုန်းတွေ Root လုံးဝမလိုပဲ မြန်မာစာချိန်းဖို့ bat ဖိုင် SAMSUNG AIO Font Changer ~ သန်းတိုးအောင် နည်းပညာမှတ်စု
SAMSUNG, မြန်မာဖော့င် 12 comments
SAMSUNG AIO Font Changer ( bat ဖိုင်)
SAMSUNG AIO Font Changer ( bat ဖိုင် )
*Samsung ဖုန်းတွေ Zawgyi Locale ချိန်းမယ်
*Display font တွေသွင်းမယ်
*သွင်းပြီးတာနဲ့ ကီးဘုတ်ပါ ချိန်းပြီးသားဖြစ်နေလိမ့်မယ်
*အားလုံး oneclick ပဲ USB Debugging သာမိနေပါစေ
SAMSUNG Driver အရင်သွင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် မသွင်းရသေးပါက အောက်ကဖိုင်ကို အရင်ဒေါင်းသွင်းထားပါ
Usb Debugging On နည်း ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ
On ပြီးသွားလျှင် ဖုန်းမှာ allow တက်လာပါက allow အမှန်ခြစ်ပြီး ok ပေးပါ
1 ကိုနှိပ်လျှင် Locale ချိန်းမယ် Android6နှင့်7အထက်အတွက်
2 ကိုနှိပ်လျှင် Display Font များထည့်မယ် Android 2.3 မှ6အတွက်
3 ကိုနှိပ်လျှင် English US ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ထားမယ်
မှတ်ချက်။ ။ ဖောင့်ပြန်ပြောင်းသွားလျှင် မြန်မာဖောင့်ချိန်းပြီး Fontsize ကြီးပေးလိုက်ပါ။
Display Font နှိပ်လိုက်တာနဲ့
Display Font များသွင်းသွားပြီး Font Change ဖို့ Screen ဖုန်းမှာတက်လာပါမယ်။
PN TTA Font , TTA SAM 6.0.1 , Z1 ဖောင့်များ ချိန်းကြည့်ပါ။
Download Tool @ Download
Credit Nay Shein Oo (Joy Mobile)
*** Root လုံးဝမလိုပဲ မြန်မာ Zawgyi ချိန်းနိုင်ရန် ***
phyo lay October 10, 2017 at 6:02 PM
ဒေါင်းတာ can't open file ဖြစ်နေတာ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ အကို
Aung Pyae November 26, 2017 at 3:56 PM
S6, android version 7.0 ရလားဗျာ
Than Hlaing Myint December 24, 2017 at 1:40 PM
android version7တော့မသိဘူးandroid version6ကတော့ရတယ်အကို
Than Hlaing Myint December 24, 2017 at 1:42 PM
Aye Min Ko January 9, 2018 at 3:01 PM
Aye Min Ko January 9, 2018 at 3:02 PM
version 6.0.1 pls help me bro
saimg mglatt February 8, 2018 at 4:26 PM
လေးဒေါင့်တွေပဲ ပေါါ်နေတယ် အကို j7 2016 မှာ မရလို့
NAY WIN AUNG January 18, 2018 at 9:28 PM
Thanksafor your software application. Samsung version 7.0 also ok with 1 click only. Yours tool is very supportive and effective. Awesome!
Baby rapper March 24, 2018 at 9:48 PM
I just got my s9+ and looks like it does not work for s9
Android version is 8.0.0
Mee April 26, 2018 at 8:25 PM
bat file မတွေ့ဘူး
Justin Phoe Thar May 2, 2018 at 1:50 AM
Unknown July 8, 2018 at 5:56 AM
How to install Myanmar font in Motolora G v6.0 and how to root that phone please?
I cant't find anywhere.